စမတ်ဖုန်း ဆော့ဖ်ဝဲဖြင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ပေါက်ကြားမှုများ ကာကွယ်ရန် တောင်ကိုရီးယား ကြိုးပမ်း ~ The ICT.com.mm Blog
စမတ်ဖုန်း ဆော့ဖ်ဝဲဖြင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ပေါက်ကြားမှုများ ကာကွယ်ရန် တောင်ကိုရီးယား ကြိုးပမ်း
တောင်ကိုရီးယား၊ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနသည် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ပေါက်ကြားမှုများကို ကာကွယ်ရန် ကြိုးပမ်းသည့်အနေဖြင့် ကင်မရာရိုက်ကူးမှုကဲ့သို့သော အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်များကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် စမတ်ဖုန်း ဆော့ဖ်ဝဲတစ်မျိုးကို ဝန်ထမ်းများ၏ ဖုန်းများတွင် တပ်ဆင်ကြရန် အမိန့်ထုတ်ထားကြောင်း ဇူလိုင်လ ၁၅ရက်နေ့က ပြောကြားခဲ့သည်ဟု AFP သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
တောင်ကိုရီးယား ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ဝန်ထမ်း ၁၅၀၀သည် Mobile Management Deviceဟု အမည်ပေးထားသော ဆော့ဖ်ဝဲကို မတပ်ဆင်ပဲ စမတ်ဖုန်းများကို သယ်ဆောင်ခွင့် ပေးတော့မည် မဟုတ်ကြောင်း၊ ယင်း ဆော့ဖ်ဝဲသည် ကင်မရာ အသုံးပြုမှု၊ အသံဖမ်းယူမှုတို့ကို ထိန်းချုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး စမတ်ဖုန်းများမှတစ်ဆင့် ပေါက်ကြားမှုများကို ကာကွယ်သွားမည့်အပြင် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ထမ်းများ၏ ကိရိယာများကို ခိုးဝင်ခြင်းတို့မှ ကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်ကင်မင်ဆွတ်က ပြောကြားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ လောလောဆယ်တွင် ၎င်းဆော့ဖ်ဝဲသည် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနဝင်းအတွင်း၌သာ လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် တောင်ကိုရီးယား စစ်သားအားလုံးကို ယင်းဆော့ဖ်ဝဲ တပ်ဆင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက ပြောကြားသည်ဟု ဆိုပါသည်။
Newer ယာဉ်ထိန်းရဲပုံစံဖြင့် ကြော်ငြာ ကခုန် ရိုက်ကူးခြင်းအတွက် လိုအပ်ပါက ဆက်လက် ဖြေရှင်းသွားမည်
Older အလကားရမယ့် အသုံးတည့် Mobile Appများ
စမတ်ဖုန်းတွေဟာ အစပိုင်းမှာတော့ စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ပါးကြပြီး ဖုန်းပြောရုံသက်သက်သာ အသုံး၀င်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ စွမ်းဆောင်ရည်မ...
စမတ်ဖုန်း တစ်လုံး၀ယ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လို စံနှုန်းတွေကို သင် ကြည့်ပြီး ၀ယ်ယူသလဲ? ဈေးနှုန်း နဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်တွေကို အဓိက ကြည့်ပြီး ၀ယ်ယူမယ်လ...
စမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ်မှုဟာ ဒီနှစ်ကုန် မှာ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ရဲ့ ခုနစ်ပုံ တစ်ပုံ အရေအတွက် ကိုရောက်ရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသန အဖွဲ့ တစ်ခုဖြစ်တ...
သင့်ရဲ့ စမတ်ဖုန်းအဟောင်းကို ရောင်းဖို့ အစီအစဉ် ရှိပါသလား? iPhone 5ဆိုရင်တော့ ဈေးအမြင့်ဆုံး ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာနိုင်ဖို့အတွက် Unlockလုပ...
ဖုန်းအသစ် လဲတော့မယ် ဆိုရင်
ဆဲလ်ဖုန်းတစ်လုံးဆိုတာ ငယ်သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်နဲ့တူပါတယ်။ တစ်နှစ်(သို့)နှစ်နှစ် အချိန်အတော အတွင်းမှာ သူဟာ သင်နဲ့အတူ ရှိနေပြီး သင့်ရဲ့ လျှ...
HTC Oneနဲ့ ပုံစံတူ miniကတော့ လာမယ့် သြဂုတ်လ ၁၂ရက်နေ့မှာ အင်္ဂလန်မှာ စတင် ဖြန့်ချိသွားတော့မှာ ဖြစ်ပြီး ၀ယ်ယူသူတွေကို Simကတ်တွေ အခမဲ့ ပေး...
စပိန်နိုင်ငံ ဘာစီလိုနာမြို့မှာ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့ 2013 Mobile World Congress ပြပွဲတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် အိုင်တီ နည်းပညာ ကုမ္ပဏီက...